Fiteny seraiky - Wikipedia
Ny fiteny seraiky na fiteny saraiky na fiteny siraiky dia fiteny indô-ariana ao amin' ny vondrona lahnda, tenenina any amin' ny tapany atsimo-andrefan' ny faritanin' i Punjab (na Penjab) ao Pakistàna. Nantsoina hoe fiteny moltany (multani) izy io taloha, araka ny abaran' ny fitenim-paritra fototra ao aminy.
Ny mpiteny seraiky dia tena mifankahazo amin' ny mpiteny ponjaby filamatra ary mizara aminy ampahany betsaka amin' ny voambolany sy ny endri-teny. Amin' ny feonteny dia tena hafa tanteraka izy, ary manana toetra ara-pitsipiteny iraisany amin' ny fiteny sindy any atsimo.
Ny fiteny seraiky indraindray dia heverina ho endrika fitenim-paritry ny fiteny ponjaby. Nefa raha midina any amin' ny tapany atsimon' i Punjab dia tsy mitovy amin' ny fiteny penjaby izy, noho ny fiantraikan' ny fiteny sindy aminy.
Ny fiteny saraiky dia fitenin' ny olona miisa 25,9 tapitrisa ao Pakistàna, manomboka any amin' ny faritra atsimon' i Punjab, atsimon' i Khyber Pakhtunkhwa, ary faritra an-tsisintany any avaratr' i Sindh sy atsinanan' i Balochistan. Ny mpiteny saraiky no vondrom-poko ara-piteny fahefatra lehibe indrindra ao Pakistàna.
Ny fiteny saraiky dia tsy heverina ho fiteny mahaleo tena any Pakistàna, na eo amin' ny sehatra eo amin' ny firenena na an-toerana. Na izany aza, misy ny fifanakalozan-kevitra eo amin' ireo antoko pôlitika maromaro mba hamoronana faritany ho an' ny vahoaka saraiky amin' ny aqlalan' ny fizaràna an' i Punjab.
Fiteny any Pakistàna
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_seraiky&oldid=1045156"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 11:03 ity pejy ity.